Die Casting Tooling - Die Casting Mould Manamboatra - Volavola ho an'ny famokarana - Casting Minghe
Mila kojakoja fanaovana bobongolo amin'ny ampahany betsaka amin'ny famokarana? Mitady fomba mahomby kokoa amin'ny famokarana sy famokarana? Aza adino ny serivisy fanariana maty sy famokarana lasitra! Ao Minghe, manome famonoana maty maty kalitao sy mora vidy izahay ho an'ny prototypes sy ny faritra famokarana amin'ny fotoana famadihana haingana.
Inona ny fanamboarana bobongolo maty?
Ny fitaovana famoahana maty, ny milina fanariana maty ary ny bobongolo no singa telo lehibe amin'ny famokarana famoahana maty, ary tsy misy ilaina ny iray amin'izy ireo. Ny antsoina hoe fizotran'ny fanariana maty dia ny fampiasana voajanahary sy feno an'ireo singa telo ireo, mba hahafahany miorina tsara, amin'ny rhythmically ary amin'ny fomba mahomby amin'ny famoahana casting mahay miaraka amin'ny fisehoana tsara, ny kalitao anatiny ary ny refy mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny sary na fifanarahana. na koa casting avo lenta. ;
Lasitra fanariana maty dia fitaovana handefasana ampahany vy, fitaovana iray hamitana ny dingana famonoana maty amin'ny milina fananganana maty maty. Ny dingana fototra amin'ny famoahana maty dia: fanariana haingam-pandeha haingam-pandeha voalohany amin'ny vovo-bobongolo, ny bobongolo dia misy velarana lava azo ovaina, voatsindry mafy izy io miaraka amin'ny fizotran'ny metaly metaly, izay manala ny fihenan'ny banga. Ny lesoka malemy ihany koa dia mahatonga ny firafitry ny banga ho tonga voa tapaka ao amin'ny fanjakana sandoka. Ny fananana mekanika feno ny banga dia nohatsaraina betsaka.
Ny firafitry ny bobongolo casting
Fandefasana ampahany (mihetsiketsika sy miorina amin'ny bobongolo bobongolo, atsofoka amin'ny bobongolo, fotony manintona fototra, sns.)
Ampahany fototra bobongolo (mihetsiketsika sy miorim-paka matevina, tabilao AB, pallet, tongotra bobongolo)
Rafitra bypass (tanany sprue, shunt cone, cross runner, fidirana ary fivoahana)
Rafitra mihoampampana (tanky mihoampampana, tankin-tavy)
Fitaovana fanesorana (thimble, lozisialy fanitsiana thimble, takelaka fanesorana, levera reset)
Sombin'ny mpitari-dalana (paositra mpitari-dalana, tanany mpitari-dalana, paositra mpitari-dalana afovoany, tanany mpitari-dalana afovoany)
Fomba fiasa mitarika (mitarika slider manintona, poste des guide oblique, clamping block, lohataona, sns.)
Ny hafa (rafitra mangatsiaka, rafitra fanamafisana, tsanganana fanamafisana, sns.)
Fitaovana fanariana bobongolo maty mahazatra
H13 (vy mahatohitra hafanana) ho an'ny atidoha bobongolo eo anoloana sy aorina, ny fotony manintona ny fotony, ny tanany sprue, ny shunt cones, sns.); 45 # vy (ho an'ny takelaka A, B, slider, tsangambato mitarika, sns.); T8, T10 (tsatokazo mpitari-dalana), Toro-tànana, fantson-tànana, tehina famerenana, sns.); A3 vy (ny lasitra eo anoloana sy aoriany dia mamono, paleta, takelaka misy tongony, tongotra bobongolo, sns.)
Ny fizotry ny endrika famolavolana ny bobongolo maty
Araka ny fitaovana ampiasaina ao amin'ny vokatra, ny endrika sy ny maha-marina ny vokatra ary ny tondro hafa, dia dinihina ny fizotrany ary tapa-kevitra ny fizotrany.
Fantaro ny toerana misy ny vokatra ao amin'ny lavaka famolavolana, hamakafaka sy hamolavola ny velarana fisarahana, ny rafitra mihoampampana ary ny rafitra raraka.
Mamolavola ny fivoriana fototra sy ny fomba fanamboarana ny hetsika tsirairay.
Famolavolana ny halaviran'ny hery misintona.
Famolavolana ny mekanisma ejector.
Fantaro ny milina fanariana maty, mamolavola ny bobongolo sy ny rafitra fampangatsiahana.
Zahao ny refy mifandraika amin'ny lasitra sy ny milina fanariana maty, ary sariho ny sarin'ilay bobongolo sy ny faritra tsirairay.
Vita ny famolavolana
Tombony amin'ny serivisy famolavolana sy famolavolana bobongolo maty
Famokarana avo lenta, mora mahatsapa fandidiana mandeha ho azy.
Famaranana tsara ambonin'ny.
Famokarana habetsahana lehibe azo ampiasaina.
kely mila hamita ampahany aorian'ny famolavolana.
Automation hitehirizana ny vidin'ny famokarana.
Famerimberenana sy fanalefahana tsara.
Ny Die Casting dia miteraka taham-pahavitrihana ambany noho ny fizotry ny famokarana nentim-paharazana toy ny machining CNC.
Ahenao kely ny fako.
Ireo ampahany novokarin'ny serivisy fanaovana bobongolo dia ampiasaina amin'ny fananganana sy fananganana, sakafo sy zava-pisotro, varavarankely sy varavarana, fiara, kojakojan-tokantrano, fitaovana elektronika, fifandraisana ary indostria maro kokoa, ny famolavolana fiara, ny faritra fandrahoana, ary ny jiro nitarina no ho ampahany lehibe.
Fitaovana fanaovana asa tanana sy fanaovana lasitra an-tserasera - Orinasa mpamokatra lasitra matihanina farany tsara any Sina
Minghe Casting dia iray amin'ireo mpanamboatra bobongolo tsara indrindra any Shina, manolotra vahaolana famokarana bobongolo ho an'ny indostria rehetra, ao anatin'izany ny jiro tariby, fahandroana, famonoana ho faty fiara ary maro hafa. Ny tolotra asa lehibe ataonay dia misy rindrina manify na famokarana bobongolo maty, famonoana maty & fanariana famatsiam-bola, fanariana fasika, ary koa amin'ny machining CNC. Miaraka amin'ny traikefa 35 taona mahery, afaka namokatra ampahany maty maty tamin'ny alimina izahay, ny ampahany maty tamin'ny zinc ary ny ampahany maneziôma araka ny filazan'ny mpanjifa, ny sary na ny santionany. Manana teknika mandroso izahay, mpiasa mahay be izay mampiasa fitaovana avo lenta sy fanodinana diezy ambony mba hahazoana antoka fa ny faritra bobongolo no vidiny mora indrindra sy avo lenta. Na mila fitaovana haingana ianao, famolavolana bobongolo betsaka miaraka amin'ny fandeferana mafy, ny ekipanay manam-pahaizana manokana dia afaka manome vahaolana mahomby amin'ny dingana tsirairay. Mifandraisa amin'ny ekipa manam-pahaizana ary mahazoa vidiny ho an'ny serivisy fanaovana fitaovana / bobongolo, holazainay aminao ny vidin'ny famonoana maty sy ny famokarana bobongolo ao anatin'ny 24 ora!
Maninona no mifidy ny serivisy fanamboarana lasitra Die Cast?
Betsaka ny orinasa mpamorona bobongolo. Fa maninona ianao no tokony hifidy anay ho mpamatsy fitaovana? Ireto misy antony:
Ny fahaiza-mamokatra avo lenta sy ny vidin'ny fifaninanana ho an'ny serivisy fanariana maty no atolotra.
Manana traikefa amin'ny famokarana lasitra maty izahay nandritra ny 35 taona mahery ary nahazo laza tsara.
Serivisy sy serivisy ho an'ny mpanjifa miavaka.
Drafitra sy karazany bobongolo maty marobe marobe - rindrina manify, fanariana Gravity, fanariana fampiasam-bola & fanariana fasika azo atao mifanaraka amin'ny filan'ny fanao.
Ataovy marina tsara ny fanariana ampahany maty araka ny sary na ny santionanao.
Farano amin'ny alàlan'ny famolavolana bobongolo ara-potoana ny ampahany mba hanomezana fanampiana matanjaka indrindra ho an'ireo tetik'asa R&D anao.
Ny fitanisana an-tariby, ny famakafakana ny famolavolana ary ny fizotry ny famokarana dia ahafahantsika mandefa baiko miorina amin'ny tsindrona haingana toy ny 1 andro.
Izahay dia manana fitaovana famokarana mandroso sy fotodrafitrasa, teknolojia ary fitaovana hampiasana ny bobongolo tena marina indrindra ary koa ny lafiny lehibe.
Izahay dia manana injeniera za-draharaha indrindra sy mpiara-miombon'antoka fitaovana izay tena hanisy fiovana amin'ny fotoana itarihanao, ny vidinao ary ny kalitaonao farany.
Die Casting bobongolo famolavolana & fanaovana - Ahoana no hanaovana Die Casting bobongolo
Betsaka ny anton-javatra tokony hodinihina amin'ny Die Casting, fa ny famolavolana ampahany amin'ny Die Casting Mould dia tena manakiana. Ny fahazoana azy tsara dia mety hidika ho ambany ny vidin'ny fidirana, ny kalitaon'ny famokarana avo lenta, ny fotoana fohy kokoa ary ny fivoriana haingana. Amin'ny maha loharano injeniera za-draharaha sy mpamolavola vokatra anay, manana olon-tsotra na ekipa matihanina izahay izay afaka manampy anao hamolavola ireo ampahany novonoina ho faty. Ny ekipanay injenieran'ny famolavolana die casting dia manampahaizana manokana amin'ny fanaovana sary miaraka amin'ny CAD, CAE, CAM, izay matetika mampiasa SOLIDWORKS, PRO ENGINEER, UNIGRAPHICS, ary rindrambaiko fandalinana MOLD FLOW.
Serivisy fanamboarana bobongolo manerantany
Minghe Casting dia mpamokatra manerantany misy singa marim-pototra mahazatra sy maro sosona. Ny injenieranay dia manolotra vahaolana famolavolana ho an'ny indostria isan-karazany ao anatin'izany ny elektronika mpanjifa, fiara mandeha amin'ny fiara, fahasalamana ary maro hafa. Rehefa tafiditra am-piandohan'ny tetikasa ireo injenieranay dia afaka manampy amin'ny famolavolana fitaovana sy ampahany manokana amin'ny famokarana betsaka izy ireo. Ny mpanjifanay rehetra dia mahazo fahitana sy fahaizana mandritra ny dingana rehetra amin'ny tetikasa. Mifandraisa amin'ny ekipan'ny injeniera eto raha hangataka teny nindramina androany.
Fomba mahazatra fito amin'ny fanaovana fanariana maty:
Dingana 1: DFM vokatra & Famolavolana bobongolo
Dingana 2: Fividianana vy ary fividianana kojakoja hafa
Dingana 3: Machining CNC
Dingana 4: Fitsaboana hafanana
Dingana 5: WireCutting / EDM / Milling / Drilling /
Dingana 6: Mety amin'ny bobongolo, fivoriambe ary fitsapana
Dingana 7: Diovina, esory, ary firafitra
Raha mifanaraka amin'ny famaritana antsika ny vokatra fanariana farany dia tonga ny fotoana handefasana sy hamolavolana ny bobongolo. Avy eo dia tapaka ny dingana rehetra.
Volavola ho an'ny atiny famokarana
Multi-Slide & Conventional Die Casting: Ao amin'ny Minghe Casting, manome karazana fitaovana roa izahay: multi-slide sy mahazatra. Samy manana ny tombony manokana ananany ary ny injenierantsika mahay dia afaka manampy amin'ny fanapahana izay fitaovana tsara indrindra ho an'ny tetikasa tsirairay.
Misy fahasahiranana ve amin'ny firafitry ny vokatra, na mila fanovana na fanatsorana azy io; na azo foanana ny toeran'ny undercut.
Fiheverana ny fandeferana amin'ny endrika sy ny toerana ary ny famolavolana bobongolo. Raha misy fandeferana ara-jeometrika dia andramo atao amin'ny lafiny iray amin'ny lasitra, toy ny bobongolo eo aloha na ny bobongolo aoriana na ny faran'ny laharana.
Fanamafisana ny zoro drafitra sy zoro R.
Na misy faritra misy rindrina manify na sarotra zahana amin'ny vokatra dia mila havaozina ny famolavolana vokatra.
Na mety hitranga ny fahatapahan'ny lavaka amin'ny firafitra manify amin'ny toeran'ny lavaka ary raha mila ampiana izany.
Na mora esorina ny vokatra, na asiana cool na hatsaraina ho an'ny fitsaboana ny firafitry ny vokatra.
Na azo amboarina amin'ny fitaovana mihena ny vokatra mba hampihenana ny vidin'ny vokatra.
Mila fandefasana aorian'ny fandeferana ve ny fandeferana amin'ny vokatra? Moa ve ny toerana misy ny masinina mampiakatra ny famelana ny famerenany sy ny fametrahana ny toeran'ny fitaovana?
Na mila mampitombo ny fizotran'ny fitsaboana amin'ny tany ambony ny vokatra.
Raha toa ka mila fitomboka ny fanodinana aorian'ny fanodinana, na misy teboka fametahana maty
Na azo tsotsorina ny faritra fanodinana ny vokatra, dia ny bobongolo no anaovana azy mivantana, toy ny: ny slot hisorohana ny zoro, ny mpanapaka fikosoham-bary lehibe dia tsy afaka manadio ny zoro.
Na ara-dalàna ny toerana famahanana lakaoly sy ny fomba fanesorana ny noza amin'ny vokatra, na mety atahorana hokapohina ianao, na mora esorina.
Na mety ny famolavolana ny toeran'ny kitapo slag ary mety amin'ny fikolokoloana sy ny famolahana.
Ny isan'ny bobongolo amin'ny vokatra, ny fomba laharana ny vokatra ary ny fisafidianana ny taonina an'ny milina fanariana maty.
Na manana kaody daty sy laharan'ny lavaka ny vokatra.
Na mitombina ny toeran'ny thimble vokatra, na hisy fiantraikany amin'ny fisehoan'ny vokatra, toy ny marika thimble, fonosana ambony.
Raha mitombina ny famolavolana ny tsipika fisarahana ary mora ve ny manodina sy manaisotra azy.
Na ny faritra malemy amin'ny vokatra dia mila hamafisina, toy ny fampidirana tetezana sy fanesorana azy ireo aorian'ny fikarakarana azy.
Raha avo loatra ny fepetra fandeferana dia takiana ny fandinihina ny fandeferana hiezaka ny mpanjifa hampiala ny fitakiana fandeferana.
Na ny sary momba ny famolavolana vokatra 、 famolavolana bobongolo na fizarana famonoana ho faty farany fotsiny no ilainao, ny orinasa Minghe Die Casting dia afaka manome fahafaham-po ny filanao amin'ny vidin'ny fifaninanana, ny fahombiazana miavaka ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra.
Product Ampidiro ny tolo-kevitra momba ny toerana
Soso-kevitra momba ny toerana hamoahana
Soso-kevitra momba ny fampangatsiahana bobongolo (bobongolo eo anoloana)
Soso-kevitra momba ny fampangatsiahana bobongolo (bobongolo miverina)
Karazan-javamaniry sy hetsika fanokafana bobongolo
Famakafakana angovo momba ny vokatra (Tari-dalan'ny lasitra aoriana)
Famakafakana angovo momba ny vokatra (Làlan'ny lasitra eo anoloana)
Famolavolana ny famolavolana lasitra sy ny milina